DOWNLOAD ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA SAMSUNG SCX 3400 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ọhụụ ọhụrụ nke ọkpụkpọ vidiyo na-apụta kwa oge, anyị na-adụkwa ọdụ ka imelite ya ozugbo enwere ike. Nhọrọ kachasị mma bụ iji mee ka mmelite na-arụ ọrụ, ka ị ghara ịgbaso nsụgharị nke nsụgharị ọhụrụ.
Kwado mmelite ngwa ngwa ikpo ọkụ
Iji nweta mmelite site na Adobe, ọ kachasị mma iji mezi mmelite akpaka. O zuru ezu iji mee ya nanị otu ugboro, ma jiri oge ọkpụkpọ ọkpụkpọ ahụ ugbu a mee ihe.
Iji mee nke a, meghee "Malite" ma họrọ "Ogwe njikwa". Na Windows 7, ịnwere ike ịchọta ya n'akụkụ aka nri. "Malite", na Windows 8 na Windows 10 ịkwesịrị ịpị "Malite" pịa nri ma họrọ "Ogwe njikwa".
Maka mma, gbanwee echiche ahụ "Obere Oyiyi".
Họrọ "Flash Player (32 ibe n'ibe)" na window nke meghere, gbanwee na tab "Mmelite". Ị nwere ike ịgbanwe ọkwa mmelite site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Gbanwee Ntọala Ntọala".
N'ebe a, ị nwere ike ịhụ nhọrọ atọ maka ịlele maka mmelite, anyị ga - ahọrọ nke mbụ - "Nye Adobe ohere ịwụnye mmelite". N'ọdịnihu, mmelite niile ga-abịa ma wụnye na kọmputa gị na-akpaghị aka.
Ọ bụrụ na ịhọrọ nhọrọ "Nye Adobe ohere ịwụnye mmelite" (mmelite akpaka), mgbe ahụ n'ọdịnihu usoro ahụ ga-agbakwunye mmelite ozugbo enwere ike;
Nhọrọ "Gwa m tupu ị wụnye mmelite" Ị nwekwara ike ịhọrọ, na nke ikpe ị ga-enweta window mgbe ọ bụla na-agwa gị banyere mbipute ọhụrụ maka nrụnye.
"Ọ dịghị mgbe ịlele maka mmelite" - Otu nhọrọ nke anyị na-akwado siri ike, n'ihi ihe ndị mere ka a kọwaa n'isiokwu a.
Mgbe ịhọrọla nhọrọ mmelite akpaka, mechie windo ntọala.
Hụkwa: Eweliteghị Flash Player: ụzọ ise iji dozie nsogbu ahụ
Nyocha akwụkwọ ntuziaka
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwuo mmelite akpaka, ma kpebie ime ya n'onwe gị, ị nwere ike ibudata ọhụụ ọhụrụ na ukara Flash Player.
Gaa Adobe Flash Player
I nwekwara ike imeghari Flash Player Njikwa Ntọala na ụzọ a kọwara ntakịrị elu, ma pịa bọtịnụ ahụ "Lelee ugbu a".
Ihe a ga-eme ka ị gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti na ndepụta nke usoro nsụgharị nke ugbu a. Site na ndepụta e nyere, ị ga-achọ ịhọrọ Windows na ikpo ihe na ihe nchọgharị. "Chromium dabeere na ihe nchọgharị"dị ka nseta ihuenyo n'okpuru.
Akụkụ ikpeazụ na-egosi ụdị mbipute nke ugbu a, nke enwere ike iji ya tụnyere nke arụnyere na kọmputa gị. Iji mee nke a, banye na ntanetị nchọgharị: // plugins ma hụ mbipute Adobe Flash Player.
Ọ bụrụ na enwere mbelata, ị ga-aga na saịtị //get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions/ ma budata ọkpụkpọ kachasị ọhụrụ nke ọkpụkpọ vidiyo. Ma ọ bụrụ na nsụgharị ahụ bụ otu, mgbe ahụ ọ dịghị mkpa imelite.
Hụkwa: Otu esi chọpụta ụdị Adobe Flash Player
Usoro nkwenye a nwere ike iwepụtakwu oge, ma ọ ga-ewepụ mkpa ị budata ma wụnye ihe ọkpụkpọ mgbe ọ na-adịghị mkpa.
Nwelite nchịkọta ntuziaka
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji aka wụnye mmelite ahụ, buru ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti Adobe ma soro usoro ndị dị na ntuziaka dị n'okpuru.
Ntị! Na netwọk ị nwere ike ịchọta ọtụtụ saịtị na n'ụdị mgbasa ozi ma ọ bụ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ na-enye iji wụnye mmelite ahụ. Echela ụdị ụdị mgbasa ozi a, n'ihi na n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ bụ ọrụ nke ndị omempụ ndị, na nke kachasị mma, tinyela ụdị adware dị iche iche na faịlụ ahụ echichi, na n'ọnọdụ kachasị njọ ebutewo ya na nje. Nbudata mmemme Flash Player site na saịtị Adobe.
Gaa na Adobe Flash Player Version Page
Na windo nchọgharị nke meghere, ị ga-ebu ụzọ dee ụdị nke sistemụ arụmọrụ gị, wee sụgharịa ihe nchọgharị ahụ. Maka Yandex Nchọgharị họrọ "maka Opera na Chromium"dị ka nseta ihuenyo.
Ọ bụrụ na e nwere mkpọsa mgbasa ozi na ngọngọ nke abụọ, wepụ ihe nlele dị na nbudata ha ma pịa bọtịnụ ahụ "Download". Gbaa faịlụ ndị a ebudatara, wụnye ya, na pịa pịa "Emere".
Ihe omimi vidiyo
Ugbu a etinyewo Flash Player nke kachasị ọhụrụ na kọmputa gị ma dị njikere iji.